"Moa misy olona mahafin-tena ao amin’ny fierena va ka tsy ho hitako? hoy Jehovah ; tsy manerana ny lanitra sy ny tany va Aho ? " Jeremia 23:24
"Andriamanitra mahalala ny fonareo." Lioka 16:15
Zava-miafina loatra io fijerin’Ilay Andriamanitra velona io! Ny masony dia mahafaoka ny zavatra rehetra, mahatsikaritra ny zavatra rehetra, na ny ao amin’izao tontolo midadasika izao, na ny ao amin’ny faritra miafina indrindra ao an-tsaina. Hitany ireo antony mahatonga antsika hiovaova tarehy sy fihetsika, voavakiny izay ao anaty fontsika. Hainy avahana ny fanatanterahana sy ny fikasana, hainy avahana ny saron-tava sy ny tena izy. Fantany ny antony miafina indrindra manosika antsika hanao zavatra, sy ny fihevitra lalina indrindra ao anatintsika. Inona no hataontsika manoloana izany fijerin’Andriamanitra izany? Afaka manandrana mandositra na tsy mieritreritra izany isika, afaka miaina toy ny hoe tsy misy izany, na mandà mihitsy ny fisiany aza.
Mifanohitra amin’izany, raha fantatsika ilay fitiavany nanavotra antsika, vao mainka isika maniry fatratra io fijerin’Andriamanitra io, izany hoe miezaka miaina araka ny sitrapony, mitandrina izay lazainy ao amin’ny Baiboly. Satria fantatsika fa fijery feno fitiavana no ijeren’Andriamanitra antsika. Azontsika lazaina Azy avokoa ny hafaliana, alahelo, fanahiana, ary faniriana. Nefa aoka koa hihaino ny feon’ny fieritreretantsika. Raha manameloka antsika izany, mikasika teny na zavatra natao, dia aoka hambara amin’Andriamanitra izany.
Andriamanitra dia mahita ny ratsy ary manameloka izany, kanefa “raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy, ka mamela ny fahotantsika” (1 Jaona 1:9). Tsy mampihanjahanja ahy amin’ny hafa ny fijerin’Andriamanitra, fa kosa miaro sy mampitandrina momba ny loza, “hanoro izay tokony halehan’ny olona” (Joba 33:23). Ny hoe hitan’Andriamanitra, dia tsy hoe tsaraina, fa tiana sy arovana aza. Arakaraka ny ahafantarantsika an’Andriamanitra no haniriantsika hiaina eo ambany fijeriny, amin’ny alalan’ny finoana.